Al-shabaab oo la wareegay deegaanka Ceel-dheere | KEYDMEDIA ONLINE
Al-shabaab oo la wareegay deegaanka Ceel-dheere
Kooxda Al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Ceel-dheere oo u dhaxeeya magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Sida ay ogaatay Keydmedia Online, xalay saqdii dhaxe ayay dadka deegaanku ku kaceen rasaas goos goos ah oo u dhaxeysa Ciidamada Galmudug ee ku sugnaa koontaroolka magaalada ee yaalla dhanka Guriceel.
Dagaal kooban kadib, Kooxda Al-Shabaab ayaa gudaha u galay magaalada, waxa ayna saacado kooban oo ay gacanta ku hayeen maamulka Deegaanka kadib u baxeen dhanka koofureed.
Ilo wareedyo muhiim ah u xaqiijiyeen KON waxaa jira khasaaro ka dhashay weerarkaasi, oo dhimasho iyo dhaawacba geystay.
Ceel-dheere oo ka mid ah magaalooyinka Urur-kii Ahlu-sunna ay ka xoreeyeen Al-Shabaab 12 sano ka hor ayay 60 cisho guduhood markii labaad la wareegeen kooxdan.
Bartamihi Bishii hore ayuu Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid sheegay in Al-Shabaab soo buux dhaafiyeen deegaanada Galmudug, hayeeshee tan iyo markaas maamulkiisu ma qaadin how-gal ka dhan ah kooxdaas oo looga xoreynayo deegaanno ka tirsan maamulka.
Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor ayaa sal-dhig ka dhigtay magaalada Muqdisho muddooyinkii danbe, isagoo dusha saartay masuuliyad aaan shaqadiisa ahayn oo la xariirta doorashooyinka dalka inkastuu sheegay in uu ku fashilmay waan-waan uu waday.
Dowladda Farmaajo oo dhowr jeer cutubyo ka tirsan ciidamada Haramcad geysay Dhuusamereeb ayaa gacan u qaadin kooxda Al-shabaab, maadaamada u jeedka ay ciidanka u geeysay Galmudug uu yahay kaliya in ay ku boobto kuraasta Baarlamaanka ee lagu soo dooranayo Dhuusamereeb.